Abụ Ọma 16 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 16:1-11
Ihe ọma niile si n’aka Jehova
‘Jehova bụ òkè m’ (5)
‘N’abalị, ihe m na-eche na-akụziri m ihe’ (7)
‘Jehova nọ m n’aka nri’ (8)
“Ị gaghị ahapụ m n’ili” (10)
Miktam* Devid. 16 Chineke, biko chebe m, n’ihi na ọ bụ gị ka m ji mere ebe mgbaba.+ 2 M sịrị Jehova: “Ị bụ Jehova. Ihe ọma niile na-emere m* si n’aka gị. 3 Ndị nsọ ndị nọ n’ụwa,Bụ́ ndị dị ebube, na-eme ka obi dị m ezigbo ụtọ.”+ 4 Ndị ji obi ha niile na-efe chi ọzọ na-akpatara onwe ha ọtụtụ nsogbu.+ E nweghị mgbe m ga-eso ha chụọ àjà mmanya ha nke ha na-eji ọbara achụ,Agaghịkwa m e ji ọnụ m* akpọ aha ha.+ 5 Jehova, ị bụ òkè e kenyere m,+ bụrụkwa iko m.+ Ị naghị ekwe ka ihe ọ bụla mee ihe m ketara. 6 Ebe e kenyere m mara mma. N’eziokwu, ihe m ketara dị m mma.+ 7 M ga-eto Jehova, onye dụrụ m ọdụ.+ N’abalị, ihe m na-eche n’ime ime obi m na-akụziri m ihe.*+ 8 M mere ka Jehova nọrọ n’ihu m mgbe niile.+ Ebe ọ bụ na ọ nọ m n’aka nri, e nweghị ihe ga-eme ka m daa.*+ 9 N’ihi ya, obi na-atọ m ụtọ. Ana m enwe* ezigbo aṅụrị. Ahụ́ rukwara m ala. 10 N’ihi na ị gaghị ahapụ m* n’ili.*+ Ị gaghị ekwe ka onye jisiri gị aka ike nọrọ n’ili.*+ 11 Ị na-eme ka m mara ụzọ ndụ.+ Onye nọ n’ihu gị na-enwe ọṅụ na-enweghị atụ.+ Onye nọ n’aka nri gị na-enwe obi ụtọ ruo mgbe ebighị ebi.
^ Ma ọ bụ “Àgwà ọma m.”
^ Ma ọ bụ “egbugbere ọnụ.”
^ Na Hibru, “N’abalị, akụrụ m na-agbazi m.”
^ Ma ọ bụ “ka m maa jijiji.”
^ Na Hibru, “Ebube m na-enwe.”
^ Na Hibru, “hụ olulu.” O nwere ike ịbụ, “ree ure.”
Abụ Ọma 16